Amin'ny alàlan'ny vokatra vaovao maherin'ny 13 taona mamolavola sy manatsara ny maodely taloha, misy maodely maherin'ny 20 ho an'ny fampiharana samihafa. Ny vokatra lehibe indrindra XIKOO dia misy kojakoja fampangatsiahana rivotra, kojakoja fampangatsiahana indostrialy, fampangatsiahana rivotra eo am-baravarankely, fihenan-drivotra afovoany, ho an'ny rivotra DC DC ary faritra mangatsiaka kokoa. be mpampiasa amin'ny trano, birao, fivarotana, hopitaly, gara, tranolay, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, atrikasa, trano fanatobiana entana sy toerana hafa.
XIKOO dia manana fifehezana kalitao avo lenta sy fanaraha-maso isaky ny fizotry ny famokarana. Avy amin'ny safidy material, teknolojia fanamboarana, famokarana, fonosana ary fitsapana. Ny cooler rivotra dia nankatoavin'ny CE, SASO, ROHS, IEC sns. Ary ny vokatray dia eken'ny mpanjifanay ihany koa, ny mpanjifanay mahazatra dia mitazona fiaraha-miasa maharitra miaraka aminay.
Ny tambajotram-barotra any XIKOO dia mandrakotra faritany 21 sy faritra 86 somary mandroso, mpizara hatrany amin'ny 112 manerana ny firenena. Ary amidy amin'ny firenena sy faritra 35 any ivelany ny vokatra. Mampivoatra manokana ireo mpanjifa fiaraha-miasa maharitra any Arabia Saodita, Koety, Mali, Maroc, Sudan, Vietnam, Malezia, Thailand, USA, Brezila, Alemana, Aostralia ary firenena hafa.
XIKOO Tohizo ny fikarohana sy ny fanavaozana, nahazo orinasa teknolojia avo lenta, vokatra teknolojia avo lenta ary voninahitra hafa. Nahazo patanty famolavolana maro, patantin'ny famoronana ary patanty azo ampiharina. Air cooler mpankafy dia ambany fanjifana sy tontolo iainana namana vokatra, XIKOO koa namolavola ny angovo loharano vaovao masoandro DC evaporative rivotra cooler. manantena izahay handray anjara amin'ny famonjena angovo eran-tany sy ny fanamboarana tontolo iainana sariaka amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana sy fangatahana rivotra mangatsiaka XIKOO.
XKIOO dia nanambola vola be ary miasa amin'ny fampandrosoana vokatra vaovao tato anatin'ny taona vitsivitsy. Amin'ny ho avy, hitondra vokatra vaovao bebe kokoa ho an'ny mpanjifantsika izahay, Tongasoa hiara-hiasa amin'ny XIKOO, Tongasoa ny hevitra tsarao ary hampivelatra vokatra vaovao amin'ny XIKOO.